[ February 24, 2020 ] သင့်အိပ်မက်ထဲ သူခဏခဏဝင်ရောက်နေတာ ဒါတွေကြောင့်ပါနော်	KNOWLEDGE
[ February 24, 2020 ] မုံရွာမြို့တွင် ညအချိန်မတော် တွေ့ဆုံကြသည့် စုံတွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပညာပေး ဟောပြော	NEWS
[ February 24, 2020 ] အင်မတန်အဆိပ်ပြင်းဒေါသကြီးတဲ့ မြွေဟောက် အသိုက်ကို ဖမ်းပြတဲ့ ရုပ်သံ	KNOWLEDGE
[ February 24, 2020 ] အမြင့်ဆုံးအထူးဆုကြီးနဲ့ အက္ခရာမတူပဲ ဂဏန်းတူရင် ပေါက်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတော့မယ်	NEWS
[ February 24, 2020 ] မီးလောင်မှုကို အော်ပြီးသတိပေးတဲ့ ကြက်တူရွေးကြောင့်၊ မီးဘေးက လွတ်ကင်းခဲ့တဲ့ မိသားစု	NEWS
Girl, 17, shares shocking childhood pics surrounded by needles showing reality of being raised by ‘druggy’ mum
July 22, 2019 Alinn Pya Comments Off on Girl, 17, shares shocking childhood pics surrounded by needles showing reality of being raised by ‘druggy’ mum
A 17-YEAR-OLD girl has shared shocking childhood photos showing her as an infant surrounded by needles, laying bare the reality of life witha“druggy” mum. The teenager, from Idaho, posted the devastating collection online […]
July 22, 2019 Alinn Pya Comments Off on Single dad with just £4.61 took own life after waiting weeks for Universal Credit
Phillip Herron, 34, had three children to feed and was drowning in debt but ended up waiting foramonth for benefits A debt-ridden single dad of three who had waited weeks for Universal Credit […]
Ayia Napa ‘gang-rape victim’ saw ’12 attackers’ faces, one after the other’
July 21, 2019 Alinn Pya Comments Off on Ayia Napa ‘gang-rape victim’ saw ’12 attackers’ faces, one after the other’
A British tourist who claims she was gang-raped byagroup of Israeli teenagers described seeing her attackers’ faces ‘one after the other’ for an hour. The 19-year-old woman told police that the attack happened […]
July 18, 2019 Alinn Pya Comments Off on Train death ‘bullied’ boy ‘left suicide note with phone code and names’ as school hint at ‘prank gone wrong’
The 14-year-old died on Monday afternoon at Chertsey station in Surrey in front of 50 horrified classmates after being “bullied online” by trolls posting nasty comments. The letter is said to have contained two names, […]
Quality Myanmar mango fruits in air-conditioned vehicles reach market of mainland China
April 18, 2019 Alinn Pya Comments Off on Quality Myanmar mango fruits in air-conditioned vehicles reach market of mainland China
Mandalay April 1 Some businesspersons export Myanmar’s Seintalone mango to China and neighbouring countries with the use of air-conditioned vehicles by controlling the quality of products, said chair of mango group Daw Than Than Swe. […]
တပ်မတော်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့နယ်ထဲမှာ နှစ်ဘက်တပ်တွေ တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်ရဲ့ နယ်မြေ ချဲ့ထွင်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို့ KNU ဘက်က စွပ်စွဲနေပြီး ဒေသခံတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်း ထွက်ပြေးနေရတာပါ။ ဖာပွန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၄၀၆) နဲ့ KNU တပ်မဟာ(၅) တို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့လယ်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ […]
25/02/2020 မိုး… ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်း ကလေး ကလေးဝ မော်လိုက် ခန်းပတ် တမူး ဖောင်းပြင် ဟုမ္မလင်း ထမံသီ နန်းယွန်း ခန္တီး လဟယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှ ဖားကန့် ဒေသများ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်… 24/02/2020 at 4:15pm (MMT) SU SU SAN 26/02/2020 … မိုး… ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်… စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း […]
နိင်ငံအကျိုးပြု အရံမီးသတ်ရဲဘော် ဘဘ ဦးမော်စီ ဘဘ က အပြင်မှာ မျက်နှာလေးက ကြည်နေရော မြင်ရတာ တကယ်ကို အေးချမ်းလွန်းတယ်။ အရံမီးသတ် ဘဝကို လုပ်လာခဲ့တာ အနှစ် ၅၀ ကျော်ပီးလို သိရတယ်။ မီးလောင်ပီဆိုတဲ့ သတင်းကြားတာနဲ့ ရောင်းနေတဲ့ စျေးကို ပစ်ခဲ့ပီး သွားရောက်ကူညီတာလိုလဲ သိခဲ့ရတဲအတွက် အရမ်းလဲ လေးစားရတယ်။ ဘဘက သားသမီး ၅ယောက်နဲ့ ဘဝကို ရုန်းကန်နေရတာပါ။ ဘဘအသက် ၇၀ […]
မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(က)နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကို ရမည်းသင်းမြို့ တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ “အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ အမှန်တရားကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါစေ” လို့ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က ဒီကနေ့ ရုံးထုတ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာတော့ လိုပြသက်သေ ဦးနောင်နောင်နဲ့ ဦးတေဇာလင်းတို့ကို မစစ်တော့ဖို့ ဥပဒေအရာရှိက တင်ပြခဲ့ပြီး လာမယ့်ရုံးချိန်းကိုတော့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကို ချိန်းဆိုထားပါတယ်။ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး […]
သင့်အိပ်မက်ထဲ သူခဏခဏဝင်ရောက်နေတာ ဒါတွေကြောင့်ပါနော်
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်သူ့အကြောင်းတွေးအိပ်တာလည်း မဟုတ်ပါပဲနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အိပ်မက်မက်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြတယ်မှတ်လား။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာ သင့်ကို အံ့သြသွားစေမယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်ထဲကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာခြင််းဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော်။ (၁) သူသင့်ကို သတိရနေလို့ ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲကို မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကို သတိတရရှိနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိပ်မက်ထဲကို ဝင်ရောက််လာတာပဲ ဖြစ််ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေဟာ တကယ့်ကို အစွမ်းထက်လှပြီးတော့ […]